လွတ်လပ်ရေး Independence | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » လွတ်လပ်ရေး Independence
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 5, 2011 in Community & Society, Cultures, Drama, Essays.., Relationships & Family |9comments
လွတ်လပ်ရေးကိုလူတိုင်း လိုချင်မက်မောကြသည်။ အသက်ပေါင်း ဘဝပေါင်းများစွာ ပေးဆပ် ရယူကြသည်။ သမိုင်းကိုကြည့်လျင် ကျနော်တို့သည် လွတ်လပ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ထက် မခံချင်စိတ်ကို ရှေ့တန်းတင်တာများသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဘေးဥပါဒ် အန္တရယ်များနှင့် ကြုံတွေ့ကြရသည်။ လွတ်လပ်ရေးကို အင်္ဂလိပ်ဆိုပြန်လျင် independence အမှီအခို ကင်းလွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတပါးကို မမှီခိုဘဲနေရန် လက်တွေ့အလွန်ခက်သည်။ သက်ရှိသက်မဲ့များ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်နေသော နည်းပညာဦးဆောင်သည့် ယနေ့ခေတ်တွင် ဤသဘောတရား ပိုမိုထင်ရှားသည်။ သာမန်အားဖြင့် အလွန်ချမ်းသာသည့် လုပ်ငန်းရှင်သူဌေး၊ ဩဇာတိက္ကမကြီးမားသည့် ခေါင်းဆောင်၊ အောင်မြင်ထင်ရှားသည့် အသိ အတတ်ပညာရှင်များသည် သူတပါးအားမှီခိုခြင်း ကင်းလွတ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့နောက်ကွယ်တွင် အသိရခက်သည့် အပေးအယူအခြင်းအရာ များစွာရှိသည်။ နယူတန်၊ အိုင်းစတိုင်း၊ လီယိုတော်စတွှိုင်း၊ မဟတ္တမဂန္ဓီတို့လို ပါရမီရှင်များမှလွဲ၍ ကျန်သူများသည် တနည်းမဟုတ်တနည်း သူတပါးအပေါ် မှီခိုနေရသူများဖြစ်သည်။ တိတိကျကျပြောလျင် လောကတွင် အမှီအခိုကင်းခဲ့သူ တဦးတယောက်မှမရှိ၊ မြတ်စွာဘုရားတောင် ပါရမီဖြည့်ဖက် ယသော်ဓရာမင်းသမီး၊ ဗောဓိညောင်ပင်ကို အမှီပြုပြီးပွင့်သည်။
လွတ်လပ်ရေး အကြောင်းပြောလျင် ဆက်စပ်နေသည့် ဆင်တူယိုးမှား စာကားလုံးများပါမှ ပြည့်စုံနိုင်မည်။ လွတ်လပ်ရေးသည် အကျိုးတရား အဖြေဖြစ်ပြီး ၎င်းဖြစ်ပေါ်ရန် အကြောင်းများရှိသည်။ လွတ်လပ်ခွင့် (freedom) လွတ်မြောက်မှု (liberation)နှင့် လွတ်လပ်ရေး (independence) တို့သည် အစဉ်လိုက်သွားသည်။ လွတ်လပ်ခွင့် အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းစွာမသိဘဲ၊ မကျင့်သုံးဘဲနှင့် မှန်ကန်သည့် လွတ်မြောက်မှုမဖြစ်၊ အထွက်ပေါက်မှားတော့ ရည်မှန်းရာ လွတ်လပ်ရေး လွဲရသည်။ လူတိုင်းတွင် မူလ မွေးရာပါ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်စီရှိသည်။ လွတ်လပ်ခွင့်အချင်းချင်း လေးစားရသလို အပြန်အလှန်လည်း ထိန်းကြောင်းရသည်။ မိမိကိုယ်မိမိ သို့မဟုတ် မိမိဖန်တီးသော အရာများ၏ ပိတ်ဆို့နှောင်ဖွဲ့မှုများမှ ကင်းလွတ်ရသည်။ သို့သော် အများစုက ငါဆိုသော ပုံစံခွက်ထဲတွင် ပျော်မွေ့ကြသည်။ အစွန်းရောက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဟန်ဆောင်အတ္တ လွတ်လပ်ခြင်းအတုသည်ပင်လျင် ကင်းမဲ့သည်။
ရှေ့နောက်မှီ လူကြီးတဦးပြောဖူးသည်။ မဆလခေတ် သမ္မတဦးစန်းယုနှင့် အလွန်ရင်းနှီးသော ကုလားသူဌေးတဦးသည် ဥက္ကဌဦးနေဝင်း မျက်စိနောက်အောင် နေမိသောကြောင့် မှောင်ခိုအမှုဖြင့် အချုပ်ခံရသည်။ အတူအချုပ်ကျသူများ ရင်းနှီးလာသည့်အခါ သူ့ကိုဆယ်သက်စာ စားမကုန်အောင် ပြည့်စုံလျက်သားနဲ့ ခေတ်အခါမကောင်းချိန် ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်မနေကောင်းလားလို့ အပြစ်ဆိုကြသည်။ ကုလားသူဌေးက နေချင်ပေမဲ့ အောက်က တပည့်အခြွေအရံတွေက ပေးမနေဘူး။ ဆရာသွားပါ ငါတို့ ငတ်တော့မယ်ဆိုပြီး ရှေ့တွန်းထုတ်ကြတယ်လို့ဖြေသည်။ ဤသည်မှာ လွတ်လပ်သည်ဟုထင်ပြီး အနှောင်အဖွဲ့ ခံနေရခြင်း၏ ထင်ရှားသော ဥပမာဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဩဇာအကြီးမားဆုံး အမေရိကန်သမ္မတလည်း နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး ဘယ်ဖက်ကမှ အမှီအခို မကင်းလွတ်။ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီး ဝါရင်ဘူဖေး၊ ဘီလ်ဂတ် တို့လည်း မလွတ်လပ်၊ သူတို့က ပိုဆိုးပါလိမ့်မည်။ လုပ်သမျှဟုတ် စေတလုံးပိုင်ရှင် အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကော အမှီအခိုကင်းသလားဆိုခြင်းကို ကုလားသဌေးကြီး ဥပမာကိုကြည့်လျင် မြင်နိုင်သည်။ သူ့လိုအတ္တမကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တိုင်းပြုပြည်ပြုခေါင်းဆောင်များလည်း မလွတ်လပ်။ ပုထုဇဉ် သာသနာဝင် ပုဂ္ဂိုလ်လည်း မလွတ်လပ်၊ ပို့စ်မော်ဒန်ဆရာလည်း မလွတ်လပ်၊ ပစ္စည်းမဲ့သမားလည်း မလွတ်လပ်၊ အာလုံး တနည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့် အနှောင်အဖွဲ့ခံ နေကြရသည်။
အဆုံးစွန်သော လွတ်လပ်ခြင်းမျိုးကတော့ ဘုရား၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရုပ်တရား နာမ်တရားတို့အပေါ်ကပ်ငြိခြင်းမှ သူ့အဆင့်လိုက် လွတ်မြောက်မှုမျိုးသာဖြစ်သည်။ ကြုံလို့ပြောရလျင် အနာဂါမ် အရိယာအဆင့်ရောက်နေသော ဘုန်းကြီးတပါးသည် တုတိသာနတ်ပြည်ရှိ အရိမေတ္တေယျ အလောင်းနတ်သားထံ စိတ်ညွှတ်၍ တရားဆက် မတက်နိုင်ဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန် လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးအဆင့် အနူးညံ့ဆုံး နှောင်ဖွဲ့မှုသဘော ဥပမာဖြစ်သည်။ ကြီးလှစွာသော လောကုတ္တရာဈာန် ကုသိုလ်စိတ်သည်ပင် လွတ်လပ်မှုခရီးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်ရသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင် မြန်မာပြည်ကို မဟတ္တမဂန္ဓီ လာစဉ် ဘာသာရေး နှီးနှောဖလှယ်ကြသည်။ ကာမကိလေသာဆန္ဒအား ထိန်းချုပ်ရာတွင် ဂန္ဒီကြီးက ကျမ်းစာ ရွတ်ဖတ်၊ ဟိန္ဒူဘုရားဂုဏ်တော်ပွား၍ ဆင်ခြင်သည်ပြောတော့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှိများက ပြသနာကို ရှောင်ပြေးခြင်း၊ ပိုအားကြီးသောအရာဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်။ ပညာနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့မှသာ အဆုံးတိုင် ဖြေရှင်းခြင်းမည်သည်ဟု ပြန်လှန်ဆွေးနွေးသည်။ သစ္စာလေးပါးတရားတော်ဖြင့် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
လွတ်လပ်ခွင့်သည် လူတိုင်း၌ရှိသော်လည်း စိတ်ထားတတ်သူသာ လွတ်မြောက်သူဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို open mind မြန်မာလို ခွင့်လွှတ်နားလည် စိတ်ထားရှိခြင်းသည် ကျနော်တို့လို သာမန်လူ များအတွက် လွတ်လပ်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်နှင့်မတူ ကွဲပြားခြားနားသည်များကို လက်ခံနားလည်ပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း တို့ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ချုပ်နှောင်ဖွဲ့ ပုံသွင်းထားခြင်းမှ ရုန်းထွက်ရသည်။ မိမိ လက်ခံထားသော အယူအဆနှင့် မတူသည်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းတို့သည် ပြသနာကို ရင်မဆိုင်ဘဲ ရှောင်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိက အားကောင်းနေလျင် အဆင်ပြေသော်လည်း အားနည်းသည့်အခါ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးသည်။ အမြော်အမြင်ရှိသူများက အိမ်တွင်းရေးမှ ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးအထိ မျက်စိနားစွင့် နှလုံးသားကိုဖွင့်ပြီး မတူသူများထံမှ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းပြီး ပိုမိုကောင်းမွန် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းတို့ကို တည်ဆောက်သည်။
ကနဦးရှိရန်မှာ ခိုင်ခန့်တည်ကြည်သောစိတ်ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ကပ်ငြိခြင်းကို ခွာရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးတွင် နိုင်ငံရေးသီလ၊ စီးပွားရေးတွင် စီးပွားရေးသီလ လူမှုရေးတွင် လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာသီလ လုံရမည်။ ထိုမှတဆင့် နားလည်သည်းခံနိုင်စွမ်း စိတ်ဓါတ်အင်အား တည်ဆောက်ပြီး မတူကွဲပြားသော တဖက်အမြင်ကို လက်ခံစဉ်းစားခြင်းဖြင့် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသောဘဝကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခွင့်လွှတ်နားလည် စိတ်ထားရှိခြင်းသည် ကျနော်တို့လို သာမန်လူ များအတွက် လွတ်လပ်ရန် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်နှင့်မတူ ကွဲပြားခြားနားသည်များကို လက်ခံနားလည်ပေးခြင်း၊ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း တို့ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ ချုပ်နှောင်ဖွဲ့ ပုံသွင်းထားခြင်းမှ ရုန်းထွက်ရသည်။ မိမိ လက်ခံထားသော အယူအဆနှင့် မတူသည်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းတို့သည် ပြသနာကို ရင်မဆိုင်ဘဲ ရှောင်ပြေးခြင်းဖြစ်သည်။
တခြားတော့ ဝေဖန်စရာမရှိပါဘူး..။ ကျုပ်က နကိုကတည်းက ပွင့်လင်းမြင်သာတာကို သဘောကျတဲ့သူကိုး..။
ရှေ့ မှီနောက်မှီတော့ မဟုတ်.. ရှေ့ မြှီးနောက်မြှီး.. သူကြီးဘွဲ့ ရထားသူအနေနဲ့ .. ကွန့်တွန့်စရာလေးလဲရှိသေးတယ်.။
အဲဒီထဲပါတဲ့ ကုလားသူဌေးဆိုသူက ..တခြားသူဟုတ်ရိုးလား.. မြန်မာတွေတော်တော်များများသိတဲ့သူပေါ့..။
ယူအက်စ်မှာ .. အဆိုတော်တွေခေါ်ပြီး ပွဲသွင်းသွင်းပေးနေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်..။ နာမယ်ကြီးပဲ..။
အခြားအရောတွေမှာတော့ သူ့ သဘောသူဆောင်သမို့ 
( မြတ်စွာဘုရားတောင် ပါရမီဖြည့်ဖက် ယသော်ဓရာမင်းသမီး၊ ဗောဓိညောင်ပင်ကို အမှီပြုပြီးပွင့်သည် )
ဆိုတာကိုတော့ အဘိဓမ္မာ စာအုပ်ထူကြီးဖြင့် ကိုင်ပေါက်ခွင့်ပြုပါ
သတ္တဝါ၏သဘောအရ လူထဲကလူပေမို့ 
ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ ကိုသာ အမှီပြုပြီး
ကြီးမြတ်သော သတိ၊ ဉာဏ်ပညာတော်မြတ်ဖြင့်
ဆင်ခြင် ကျင့်ကျံ အာထုတ်တော်မူ၍သာ ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ရှိတော်မူပါသည်
(ဤ၌ ပါရမီတော်တို့ ကို တစ်ဖက်ထားပါသည်)
သို့ ပါ၍ ဖော်ပြပါ အဆိုကို
ဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုတို့များ မူးပေမဲ့ မမေ့သေးသကိုး.. သာဓု သာဓု သာဓု။
သြော်……..ဒီလိုကို ကြားဖူးနေတာတော့ ကြာပြီ။ ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေကို တစ်ခုခု ပူဆာရင် “ငါ့ကို ရှော်ဖီ များအောက့်မေနေသလား ” ဆိုပြီး အပြောခံရတာ။ ဒီလိုကိုး။ ကလေးဆိုတော့ဘယ်သိမလဲ? ဘယ်သူလဲမေးတော့လည်း ရေရေ ရာရာ မပြောတာလား ကိုယ်ကပဲနားမလည်တာလား မသိဘူး။ ကိုယ်နေတဲ့မြို့က သူဌေးတစ်ယောက်လို့ပဲ ကလေးတွေးနဲ့ နားလည်သလို သိထားတာ။ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်မှပဲ အဖြေတွေ့တော့တယ်။ ကျေးဇူး ကိုခိုင်……….
ဘာမှတော့ မဆိုင်ပါဘူး..ဒီလိုပဲ.. ရေးချင်စိတ်ပေါက်သွားလို့..။
ဗုဒ္ဓမြက်စွာဘုရားဂုဏ်ကျေးဖူးက မနှိုင်းလောက်အောင် ကြီးမားပါတယ်..။
အဲ.. မိခင်ကျေးဇူးတွေကလည်း ဆိုင်ရာ သားသမီးတွေအတွက် မနှိုင်းသာအောင်ပါပဲ..။
အမိကျေးဇူးဆပ်ရာမှာ .. ဂေါတမဘုရားရှင်တောင် ..နို့တလုံးဖိုးမကျေဘူး ဆိုတာမျိုးပြောသုံးကြတာအတွက်ပါ..။
ဦးသုခနဲ့ ကိုင်ပေါက်ရရင်.. အဲဒါ … မှားတယ်တဲ့..။
ရှင်ဆန္ဒာဓိကလားမသိဘူး အဲသလိုမျိုးရေးတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ကျနော်က ဘဒ္ဒန္တအစစ်မဟုတ်တော့ ကျမ်းဂန်လာမလာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြောကြတဲ့ မိခင်နို့ဖိုးမကြေဆိုတာ လောကမှာ မချေကောင်းတဲ့ ချေလို့မရတဲ့ ကျေးဇူးတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောလိုဟန် ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အမေ့ကြောင့် (မိဘ) လူဖြစ်ခွင့်ရတယ်၊ အဲသည့်ကျေးဇူးကို မဆပ်ဘဲ မျက်ကွယ်ပြုလို့ရသည် ပြုတတ်ကြတယ် သို့သော်ှ ဘာနဲ့မှ ချေလို့မရ။ သူမမွေးခဲ့ရင် ကိုယ်ဖြစ်ခွင့် မရှိလို့ပါ။ ဘေးအန္တရာယ် ဒုက္ခဆင်းရဲမှ ကယ်ဆယ်ခံခဲ့ရလျင် သူ့ကျေးဇူးကို တသက်လုံးဆပ်၍မကုန်။ သည်နေရာမှာ ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း ဆိုတာကို အသိနဲ့ခွဲဖို့လိုပါတယ်။ တသက်လုံး သူ့ကျေးဇူးကို အောင့်မေ့ရမယ်၊ ထိုက်သလောက် အမြဲ တုံ့ပြန်သင့်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဘဝနဲ့ ပုံအောဆပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုခံရတာနဲ့ အရာရာကို မျက်ကွယ်ပြု လိုက်လျောရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကြောင့် သားပေးသမီးပေး စတဲ့ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်စနစ် ထွန်းကားခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ တချို့က အမေမမွေး၊ သူမကယ်လည်း အခြားတယောက်မွေးး၊ ကယ်မှာပဲလို့ စောဒကတက်ပါတယ်။ ဘယ်သူမွေးမွေး၊ ဘယ်သူကယ်ကယ် သူ့ကြောင့် ကိုယ်တကယ်ချမ်းသာခဲ့ရင် အဲသည့်ကျေးဇူး ဘယ်တော့မှ မကြေတော့ပါ။ အစမရှိရင် ဘာမှဆက်လို့မရ၊ ဖြစ်ခွင့်မရှိဆိုတာ ကျေးဇူးသဘောရဲ့ အခြေခံလို့ထင်ပါတယ်။ သူ့ကြောင့်ကိုယ်ဖြစ် ချမ်းသာရာရခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးမျိုးကို ဆိုပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုသူအတွက်ကတော့ စေတနာသည်ကံဖြစ်လို့ ပြုစဉ် ကာလံဒေသံပရောဂံ စတာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေး ကွဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မပြုခင် ပြုစဉ် ပြုပြီး စိတ် စင်ကြယ်ရမယ်၊ ကိုယ်နှုတ်အမူယာ သင့်မြတ်ရမယ်လို့ ဘုရားဟောရှိပါတယ်။ အပြုခံရသူအတွက် ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများများ ပြုလုပ်သူဖက်မှ ချို့ယွင်းချက်ရှိခဲ့လျင် ရသင့်သလောက်အကျိုးများ၊ အပြုခံရသူက စိတ်နှလုံးစင်ကြယ်သူဆိုလျင် multiple effect ဖြင့်အဆများစွာ အကျိုးများပါတယ်။
မိဘကျေးဇူးဆိုတာ အလွန်ကြီးပါတယ် …
မိဘကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်တွေ ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မိဖကျေးဇူး အကျေဆပ်တဲ့နည်းလမ်းက တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ မိဖတွေကို တရားဓမ္မနဲ့ မွေ့လျော်အောင် ပြောဆိုလမ်းညွှန်ပေးရမယ်။ တရားအနှစ်သာရကို သိနားလည်အောင် တိုက်တွန်းပြီး လက်တွေ့အားထုတ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သားသမီးသာလျှင် မိဘကျေးဇူးဆပ်ရာကျတယ်လို့ တရားထဲမှာ နာဖူးပါတယ် …
မြတ်စွာဘုရားက မိခင်ရဲ့ နို့တစ်လုံးဖိုးမကျေဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး တဲ့ အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ အနှိုင်းအဆမရှိအောင်ကျေခဲ့ပါတယ် တဲ့….. အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကဟောကြားထားပါတယ်။